Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu Taliyaanigu fursad weyn ka dhex arko isu-furanka Geeska Afrika – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu Taliyaanigu fursad weyn ka dhex arko isu-furanka Geeska Afrika
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa magaalada Rooma ee dalka Taliyaaniga ka sheegay in sababta isu soo dhawaanshaha dalalka Geeska Afrika ay salka ku hayso in la helo maal-gashiga aduunka. “Marka la arko inuu gobolku nabad yahay, cid kasta ayaa maal-gashaneysa” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Taliyaaniga ayuu sheegay iney fursad weyn ka arkaan isdhex-galka cusub ee Soomaaliya, Ereteriya iyo Itoobiya. Waxa uu sheegay iney dowladaha Geeska Afrika noqdaan kuwa aan isfara-gelin, oo qaranimada isku ixtiraama, waa arrin ay soo dhaweeyeen Yurub iyo Ameerika. “Dan waxay noogu jirtaa in leys ixtiraamo, oo aan leys fara-galineyn, dowlad walibana ay madax-banaan tahay” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo, oo Rooma kula hadlayey Jaaliyadda Soomaalida dalkaas.
Waxa uu sheegay in qaabka ay hadda wax uga socdaan Geeska Afrika ay tahay mid u daneeneysa Soomaaliya. Waxa uu yiri “waxa kaliya ee aan wadaageyno marka ay tahay inaan isu furno dhinaca ganacsiga, inaga ayey taasi dan noogu jirtaa”. Madaxweynuhu wuxuu, sidoo kale, sheegay in marka wadamada deriska ay Soomaaliya u soo tababaraan ciidanka ay Soomaaliya iyaduna bari doonto sida loo ganacsado.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in ay Taliyaaniga ka wada-hadleen dib u soo celinta xiriirkii waxbarashada ee labada dal, iyo inuu Taliyaanigu dib u adkeeyo xiriirkii dhaqanka ee uu ku dhex lahaa Soomaaliya. Sida uu Madaxweynuhu sheegay, Taliyaaniga oo uu la kulmay madaxda golayaashiisa waa isla aqbaleen dhaqaajinta caawinta Soomaaliya. Taliyaanigu waa gumeystihii ay Koofurta Soomaaliya ka xurowday 1960-kii.
Xildhinaan ku eedeeyay Dowladda Dhexe dib u dhaca Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed
Hanti-Dhawraha Qaranka: Xisaab Xirka Miisaaniyadda 2018 wali lama gaarin